သကြားအခမဲ့စတော်ဘယ်ရီ Frosting + ဗီဒီယိုနှင့်အတူ gluten- အခမဲ့ကိတ်မုန့် - ကိတ်မုန့်
သကြားအခမဲ့စတော်ဘယ်ရီအေးခဲခြင်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံး gluten- ကိတ်မုန့်
သကြားနည်းသောစတော်ဘယ်ရီအေးခဲခြင်းနှင့်အတူခြစ်ရာကနေ gluten- အခမဲ့ကိတ်မုန့်
သင်ဤသည် gluten- အခမဲ့ကိတ်မုန့်သည်ကိုယုံကြည်မည်မဟုတ်! Bob ရဲ့အနီရောင်စက် 1: 1 မုန့်ဖုတ်မုန့်ညက် gluten-free ကိတ်မုန့်လုပ်တာကတကယ့်အရာလိုပဲ။ ငါထူးဆန်းတဲ့ aftertaste သို့မဟုတ်ထူးဆန်းတဲ့ texture မပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဒီအထူးသဖြင့်မုန့်ညက်ကြိုက်တယ်။ ဤသည်ကိတ်မုန့်, ​​ဒါကြောင့်အလင်းနှင့် fluffy ဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမကင် gluten- အခမဲ့သိတယ်! ငါသည်ဤကိတ်မုန့်ငါ့နှင့်အတူတွဲဖို့ကြိုက်တယ် တည်ငြိမ်ကြာပွတ်မုန့်စာရွက် အချို့နှင့်အတူရောနှော စတော်ဘယ်ရီသန့်စင် အလင်းနှင့်အနိမ့် carb ကိတ်မုန့်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤကိတ်မုန့်ကိုသကြားထဲတွင်ပိုမိုနိမ့်ကျစေလိုလျှင်၊ ကိတ်မုန့်စာထဲတွင်သကြားအစားထိုးပါ Swerve မုန့်ဖုတ်သကြား အရာများသောအားဖြင့်အတန်းမှာမုန့်ဖုတ်သည့်ကုန်စုံဆိုင်၌တွေ့နိုင်သည်။
ဤ gluten- အခမဲ့ကိတ်မုန့်စာရွက်သည်အထူးတစ်စုံတစ် ဦး အတွက်မွေးနေ့ပွဲအတွက်အလွန်ကောင်းသည်။ လူတိုင်းကသူတို့မွေးနေ့မှာကိတ်မုန့်စားဖို့ထိုက်တန်ရဲ့လား။ ငါ့အဘ gluten ရှိသည်မဟုတ်နိုင်သူသည်ငါ့နှင့်အတူဤ gluten- အခမဲ့ vanilla ကိတ်မုန့်ကိုချစ်၏ ချောကလက် ganache ။
Easy Gluten အခမဲ့ကိတ်မုန့်
ကျွန်တော့်အဖေကအသက် ၆၂ နှစ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က gluten ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ သူဟာရင်ဘတ်ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားခဲ့ရသဖြင့်သူဟာနှလုံးရောဂါရှိတယ်လို့ယူဆပြီးဆေးရုံတက်ခဲ့တယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏ဟောင်းကျောင်းကခက်ခဲတဲ့ကောင်လေးအဖေသိလျှင်, သင်ကကြီးတွေသဘောတူညီချက်သိလိမ့်မယ်!
ဆရာ ၀ န်များအားလုံးကသူသည်ကျန်းမာနေပြီးရင်ဘတ်နာကျင်မှုအတွက်စတီးရွိုက်ဆေးပေးသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ (ကျွန်ုပ်ထံမှစိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးသောမျက်စိလိပ်ထည့်ပါ။ ) အဖေနဲ့အတူသူ့နာကျင်မှုအကြောင်းပြောပြပြီးတဲ့နောက်ဂျုံနဲ့မတည့်သူဖြစ်လို့စိတ်ရောဂါရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုသတိရမိတယ်။ အဖေကတစ်ပတ်ခန့်ဂျုံစွန့်စားဖို့ကြိုးစားပြီးသူကကျွန်မကိုရယ်တယ်။
'ငါသည်တသက်လုံးမုန့်ကိုစားသုံးခဲ့ကြရတယ်။ ငါမုန့်နှင့်မတည့်ဘူး '
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အဖေ၏ရောဂါလက္ခဏာများအလွန်ဆိုးရွားလာသောအခါသူသည်မည်သည့်အစာကိုမျှမစားနိုင်ခဲ့ပါ။ သူအိပ်လို့မရဘူး၊ သူအရမ်းနာကျင်နေတယ်။ ရက်အနည်းငယ်သာသောက်သုံးပြီးနောက်သူသည် ပို၍ သက်သာခဲ့သည်။ သူစိတ်သက်သာလာတဲ့အခါသူလုပ်ခဲ့တာကမုန့်အနည်းငယ်စားပြီးစားတာပါပဲ။
သူ့ရဲ့နာကျင်မှုကအရမ်းဆိုးနေပြီးသူသေသွားပြီလို့ပြောတယ်။ သူကတကယ်ကဂျုံခဲ့သိတယ်အခါပါပဲ။ သူအကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်ခဲ့ရတယ်။ သူဘယ်လိုစားမလဲ။ သူဟာသေခြင်းတရားကိုအငတ်ခံတော့မယ်ဆိုတာသေချာခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, သူမဆယ်နှစ်အကြာသူငါအစဉ်အမြဲငါသူ့ကိုမြင်တွေ့ရခြင်းနှင့် 50 ပေါင်ပိုမိုပေါ့ပါးထက်ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းပါပဲ။ သူ၏အခြားကျန်းမာရေးပြissuesနာများမှာ (သူ၏ဒူးနှင့်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းကဲ့သို့ရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့) ဂျုံစားသုံးမှုနှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားသည်။
လူတွေဟာဂျုံနဲ့ဓာတ်မတည့်တာဘယ်လောက်ကြာခဲ့သလဲ၊ သူတို့ကလုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာမှတ်ချက်တွေရယ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေအဖေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးစေချင်တယ်။ သူကအားနည်းချက်ကိုတိုင်ကြား၊
သူသည် gluten-free ဖြစ်ရန်မရွေးချယ်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်သူ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ချက်ပြုတ်နည်းများမဆိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မလိုပါဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ bobs အနီရောင်ကြိတ်စက် 1: 1 gluten- မုန့်ညက်မုန့်ညက်ကိုအသုံးပြုပြီးသွားရောက်လည်ပတ်အခါတိုင်းငါနေဆဲငါ့အဖေ goodies ပါစေ။ မုန့်ညက်ကို gluten- free ဂျုံဖြင့်အစားထိုးလိုက်ပြီး၎င်းသည်အချိန်တိုင်းတွင်ပြီးပြည့်စုံသည်။
ဒီကိတ်မုန့်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်အလွန်ပင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ အလင်း, fluffy နှင့်စိုထိုင်းသော!
သင့်ရဲ့inရိယာထဲမှာ 1: 1 gluten free မုန့်ညက်အမှတ်တံဆိပ်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင်အမေဇုံကနေမှာယူနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါထပ်တူရလဒ်တွေကိုမအာမခံနိုင်ဘူး။ 1: 1 အစားထိုးလို့ပြောပြီး gluten free မုန့်ကိုသာသေချာအောင်လုပ်ပါ။
သေချာအောင်ရိုက်ပါ ငါပြောခဲ့သလိုပဲဒီစာရွက်ဟာငါကျော်ကြားအောင်လုပ်တဲ့နည်းအတိုင်းပြောင်းပြန်ရောနှောခြင်းနည်းလမ်းကိုသုံးတယ် vanilla ကိတ်မုန့်စာရွက်။ Reverse ရောစပ်ခြင်းသည်နူးညံ့သောနူးညံ့သောအစအနကိုဖြစ်စေသည်။ သို့သော်ဤကိတ်မုန့်၌ (gluten) ဖွဲ့စည်းထားသည့် gluten တစ်မျိုးမပါဝင်သည်ကိုသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို ၂ မိနစ်အတွင်းအရောအနှောပြုလုပ်ရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
သင်၏ကြက်ဥ၊ ထောပတ်နှင့်နို့တို့သည်အပူချိန်ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ လူတိုင်းကဒီခြေလှမ်းကိုအမြဲမေ့သွားကြပြီးကိတ်မုန့်ကိုအောက်ခြေမှာစိုစွတ်သောအစိုင်အခဲဖြစ်စေနိုင်ပြီးပိုဆိုးစေနိုင်သည်။ အဘယ်သူမျှမ bueno ။
ငါစူပါချိုမြိန်နှင်းခဲမကြိုက်ဘူးနှင့်ဤကိတ်မုန့်တတ်နိုင်သမျှနိမ့် carb / နိမ့်သကြားဖြစ်ချင်တယ်။ ငါဟာတည်ငြိမ်တဲ့ကြာပွတ်မုန့်နဲ့သွားပြီးသကြားမထည့်ဘဲမြိန်အောင်အရသာရှိတဲ့စတော်ဘယ်ရီသီး (ထည့်ထားတဲ့သကြား) ထည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အရသာ soooo ကောင်းလှ၏! သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စင်ကြယ်သောအလုပ်မလုပ်လိုလျှင်သင်သည်အချို့သောသကြားအခမဲ့စတော်ဘယ်ရီယိုရနိုင်ပြီးထိုနည်းတူကောင်းသောအလုပ်ဖြစ်တယ်!
ကြာရှည်ခံသောကြာရှည်ခံသောမုန့်သည်ကိတ်မုန့်ကိုအေးခဲစေပြီး၎င်း၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုရက်ပေါင်းများစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အနည်းငယ် gelatin အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်အံ့သြစရာ။
သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်ကိုခြစ်ရာကနေအောင်မလုပ်ချင်ဘူးလား။ Bob's Red Mill သည်အချို့သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကိတ်မုန့်များကိုလည်းကောင်းမွန်စေသည်။ vanilla သို့မဟုတ်ချောကလက်။ သူတို့အကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးအရာကသူတို့မှာထူးဆန်းတဲ့အရသာမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ ငါပင်ခြားနားချက်ကိုမပြောနိုင်ပါ။
ကုန်စုံစတိုးဆိုင်အများစုသည် Bob ၏ Red Mill ကိတ်မုန့်အရောများကိုသယ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Safeway မှ gluten-free အပိုင်း၌ရှိသည်။
ဤစာရွက်သည်အချို့သောတကယ့်ကိုကြီးကျယ်သော gluten- မပါသည့်ကိတ်မုန့်များကိုပြုလုပ်ပေးသည်။ သင့်ရဲ့ Battery ကို cupcake liners တွေနဲ့သင့်ရဲ့ cupcake pans ထဲကိုခွဲထုတ်ဖို့ရေခဲမုန့်သေးသေးလေးဒါမှမဟုတ်ဇွန်းလေးတစ်ခုကိုပဲသုံးပါ။ သင့်မှာထိပ်တန်းတောင်ထိပ်တစ်ခုရှိရန် (ငါလိုမျိုး) မဖြည့်ရန်ကြိုးစားပါ။ ၃၅၀ at တွင် ၁၈-၂၀ မိနစ်ခန့်မုန့်ဖုတ်ပါ၊ အေးမြပါစေ။ သင်အကြိုက်ဆုံး buttercream ဖြင့်သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုအေးခဲအောင်လုပ်ပါ။ ဒီတော့ yummy!
အစဉ်အဆက်အရသာအရှိဆုံး gluten ကိတ်မုန့်ပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ လတ်ဆတ်သော buttercream အေးခဲစေသည့်နူးညံ့။ နူးညံ့သော gluten free vanilla cake စာရွက်ကိုမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုကြည့်ပါ။
Gluten-free ကိတ်မုန့်သည်အလွန်ပေါ့ပါးပြီး fluffy ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် gluten-free ဖြစ်သည်ကိုမည်သူမျှမသိနိုင်ပါ။ လတ်ဆတ်သောစတော်ဘယ်ရီနှင်းခဲနှင့်အတူထိပ်ဖျား, ဒီတကယ့်အပြစ်ကင်းစင်အားရစရာ။ 8'x2 'ကိတ်မုန့်နှစ်ကြိမ်အတွက် Battery အလုံအလောက်ပြုလုပ်သည်။ ပြင်ဆင်ချိန် -ဆယ့်ငါး မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၃၀ မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:လေး မိနစ် ကယ်လိုရီ၂၉၃kcal
▢၁၄ oz (397 ဆ) Bobs Red Mill 1: 1 ကိတ်မုန့်ညက်
▢၁၂ oz (340 ဆ) သကြားဓာတ် သို့မဟုတ်သကြားအစားထိုး။ အထုပ်အပေါ်လမ်းညွှန်များကိုလိုက်နာပါ
▢၁ Tsp (၁ Tsp) မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ
▢နှစ် Tsp (နှစ် Tsp) မုန့်ဖုတ်ပေါင်ဒါ
▢၁ Tsp (၁ Tsp) ဆားငန်
▢၁ tbsp (၁ tbsp) vanilla ထုတ်ယူ
▢၁၀ oz (၂၈၄ ဆ) နို့လုံး
▢၃ ကြီးမားသည် (၃ ကြီးမားသည်) ဥ
▢၁ oz (၂၈ ဆ) ဟင်းရွက်ဆီ
▢၆ oz (၁၇၀ ဆ) ထောပတ်
စတော်ဘယ်ရီကြာပွတ် Cream Frosting
▢၈ oz (၂၂၇ ဆ) ခရင်မ်လေး
▢၈ oz (၂၂၇ ဆ) စတော်ဘယ်ရီသန့်စင်
▢၁ Tsp (၁ Tsp) gelatin အမှုန့်
▢၁ Tbsp (၁ Tbsp) ရေအေး
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ခရင်မ်လေး
မီးဖိုအား350ºFအထိအပူပေးပြီးဒယ်အိုးဖြန့်ချိပါကမုန့်ပြား ၈ လုံးပါသောအိုး ၂ လုံးကိုပြင်ဆင်ပါ
အရည်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုတိုင်းတာ။ ပန်းကန်လုံးထဲသို့ထည့်ပါ။ ပေါင်းစပ်ဖို့ whisk ။
ခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုတိုင်းတာခြင်းနှင့်သူတို့ကို stander ရောနှောပန်းကန်ထဲသို့ထည့်။
လှော်ကိုရောနှော။ ကပ်ပါ၊ အနှေးဆုံးအမြန်နှုန်းကိုဖွင့်ပါ (မီးဖိုချောင်သုံးဆေးကြောစက်တွင် ၁ ကိုချိန်ညှိပါ) ။ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်အတုံးများကိုဖြည့်စွက်ပြီးသည်အထိဖြည်းဖြည်းထည့်ပါ။ Battery သည်ကြမ်းတမ်းသောသဲနှင့်တူသည်အထိရောမွှေပါ။
စိုစွတ်သည့်အထိအနိမ့်များ၌ရောစပ်နေစဉ်သင်၏အရည်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုထည့်ပါ။ ဒီအပိုင်းကအရေးကြီးတယ်။ အရည်များများမထည့်ပါနဲ့
ရောစပ်ခြင်းမြန်နှုန်းကိုအလယ်အလတ်သို့တိုးမြှင့်ပါ (Kitchen Aid mixer တွင် ၅ ချိန်ထားပါ) အရောအနှောကိုထူပြီးလင်းစေသည့်အထိထစ်ပါစေ။ ၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသောရေခဲမုန့်နှင့်တူသင့်သည်။ သင်ဘက်ထရီကိုအပြည့်အ ၀ မရောထွေးပါကအလွန်တိုတောင်းသော၊ ငါအပြည့်အဝ2မိနစ်အဘို့အရောမွှေပါကုန်အံ့။
ပန်းကန်လုံးကိုခြစ်ပါ။ ဤသည်မှာအရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုကျော်သွားပါကသင်သည်သင်၏ Battery ထဲ၌ခဲယဉ်းသောမုန့်ညက်နှင့်ရောနှောထားသောပါဝင်ပစ္စည်းများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်နောက်မှလုပ်လျှင်သူတို့သည်အပြည့်အဝရောနှောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျန်တဲ့အရည်တွေထဲကကျန်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဖြည်းဖြည်းထည့်ပြီးပန်းကန်လုံးကိုတစ်ဝက်ကျော်ခြစ်ပြီးရပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ Battery ကအရမ်းထူပြီးမထူသင့်ဘူး။ ငါသတ္တုတွင်းကိုရော်ဘာလှံတံနှင့်အတူဇွန်းထဲသို့သွန်းရမည်။
အိုး 1/2 အပြည့်အဝဖြည့်ပါ။ ဘက်ထရီကိုညှိပြီးလေပူဖောင်းများကိုဖယ်ထုတ်ရန်ဘက်တစ်ဖက်စီကိုဒယ်အိုးအနည်းငယ်ပေးပါ။ ၈ မိနစ် ၃၀ မိနစ်၊ ၉ မိနစ် ၃၅ မိနစ်နှင့်ပိုမိုကြီးမားသောကိတ်မုန့်များကိုမိနစ် ၃၀ မျှဖုတ်ခြင်းဖြင့်အစဉ်မပြတ်ငါစားသည်။ အကယ်၍ ကိတ်မုန့်များသည်တကယ့်ကို jiggly ဖြစ်နေသေးလျှင်နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ်ထပ်ထည့်ပါ။ အဲဒီနောက် ၅ မိနစ်တိုင်းမှာငါဟာအနီးကပ်ရှိနေပြီး ၂ မိနစ်တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးတယ်။ အလယ်ဗဟိုတွင်ထည့်ထားသောသွားသွားတစ်ချောင်းနှင့်အစအနအနည်းငယ်နှင့်ထွက်လာသည့်အခါကိတ်မုန့်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကိတ်မုန့်များသည် ၁၀ မိနစ်ခန့်အေးသွားပြီးနောက်သို့မဟုတ်အိုးများသည်ထိရန်လုံလောက်သောအခါ၊ ကိတ်မုန့်များကိုလှန်လှောကြည့်။ အအေးခံစင်များပေါ်သို့အအေးခံ။ အအေးခံရန်။ ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးထုပ်ပြီးရေခဲသေတ္တာထဲမှာအေးပါ။
ကိတ်မုန့်များကိုရေခဲသေတ္တာထဲ၌ (ဒီအရွယ်အတွက်တစ်နာရီခန့်ပိုမိုကြီးမားသည့်ကိတ်မုန့်များအတွက်ကြာကြာ) အေးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ညှပ်ပြီးဖြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့တည်းတွင်ကတ္တရာစေးကိုမစီစဉ်ပါကထုပ်ထားသောကိတ်မုန့်များကိုကောင်တာပေါ်မှထားနိုင်သည်။ ရေခဲသေတ္တာသည်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်မခဲမီသင်၏ကိတ်မုန့်များကိုခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်၊ နောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုရန်ကိတ်မုန့်များကိုရေခဲသေတ္တာအိတ်များ၌လည်းအေးခဲနိုင်သည်။
gelatin ရေဖြန်းပြီး5မိနစ်ခန့်ထားပါ။ granules ပျော်ဝင်သည်အထိ microwave တွင်5စက္ကန့်ကြာအောင်အပူပေးပါ။ မွှေးသောအမြင့်ဆုံးသို့မုန့်ကိုရိုက်ပြီးလျှင်သင်၏ vanilla ထဲသို့ထည့်ပါ။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ခွက်မုန့်တစ်လုံးကို gelatin အရောအနှောထဲသို့ထည့်ပြီးအနိမ့်တွင်ရောနှောနေစဉ်သင့်အရည်ပျော်သွားသော gelatin တွင်မိုးရေပေးပါ။ 1/2 ခွက်အေးအစင်သန့်ရှင်းသောစတော်ဘယ်ရီသို့မဟုတ်သကြားအခမဲ့ယိုထဲမှာခေါက်
ဒါကြောင့်အရသာရှိတဲ့အချိုမှုန့်မပါတဲ့ကိတ်မုန့်ကိုဘယ်သူမှမ gluten မပါဘဲတောင်မသိနိုင်ဘူး။
နှင်တံ Ganache စာရွက်
ကြာပွီ ganache အလင်း, fluffy နှင့် creamy သည်နှင့်လုပ်ဖို့တကယ်လွယ်ကူသည်! သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်များနှင့်ကိတ်မုန့်များကိုအေးခဲအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း